ओलीलाई माकुनेको कडा टक्कर, दोहोरो जिम्मेवारी दिने प्रस्तावमा विमति ! | नेपालबहस
ओलीलाई माकुनेको कडा टक्कर, दोहोरो जिम्मेवारी दिने प्रस्तावमा विमति !
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपामा केन्द्रीय नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्तावले विवाद बढाएको छ । सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्तावमा विमति जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कडा टक्कर दिएका छन् ।
अघिल्लो लेखविश्वकप क्रिकेट : अस्ट्रेलियासँग स्तब्ध वेस्ट इन्डिज !
अर्को लेखशुक्रबार बिहानै काठमाडौंमा हावाहुरीसहित वर्षा (फोटोफिचर)